လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ FACE APP…..သုံးလိုက်ရင် ကိုယ့်ဆီက ဘယ်လို ဒေတာတွေ ပါသွားနိုင်လဲ..? – Zartiman
Zar Ti Man | June 21, 2020 | Knowledge | No Comments
လူတိုင်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်တိုင်းမှာ မြင်နေရတဲ့ FACE APPအကြောင်း သုံးစွဲသူ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး သိရှိစေချင်ရုံ သက် သက်ပါ…။လူတိုင်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်တိုင်းမှာ မြင်နေရတဲ့ FACE APP သင်က app စသွင်း ထားထဲက ငါ့အချက်အလက်တွေ ကို လိုသလို သုံးပါတော့လို့ ကတိပေးထားပြီးသား ဖြစ်နေ ပါပြီ။
FaceApp တခုထဲ မဟုတ်ပါ အခြားသော အလကားရတဲ့ software တိုင်း ဒီလို လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ပထမဆုံး သူ က သင့်ရဲ့ friend list ကိုယူ ပါတယ်။ ပြီးရင် ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပျူတာ အမျိုးအ စား model IP address စတာတွေအပြင်၊ ဘယ် website တွေဝင်ကြည့်ထားလဲ အွန် လိုင်းမှာ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ဆိုတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်တိုင်းမှာ မြင်နေရတဲ့ FACE APPဖြစ်ပါတယ်။
သူက သတင်းအချက်အလက်တွေကို ယူသွား ပါမယ်။ ဖုန်းထဲ ကို App တခုသွင်းရင် install လုပ်တဲ့အခါ yes I agree ဆိုပြီး ဘာမှ မဖတ် ပဲ မသွင်းလိုက်ပါနဲ့ ။ သူ့ စာချုပ် (terms and condition အောက်ကပုံမှာ)အတိအလင်း ရေးထား ပါတယ်။ yes I agree ဆိုရင် သူ့ကို လို ချင်တာ ယူပါလို့ ကတိပေး လိုက်ရတာပါ။
သူက သင့်ဆီက သတင်း အချက်အလက်တွေ ကို အွန်လိုင်း ဈေးရောင်းတဲ့ သူတွေဆီ ပြန်ပေးပြီး ဝင်ငွေ ရှာပါတယ်။ ဥပမာ သင်က “မင်္ဂ လာဆောင် မှာ ဘာဝတ် ရမလဲ ၈၃၄ တို့” ဆိုပြီး စာတကြောင်းရေး လိုက်တာနဲ့ ၊သင်နဲ့ သင့်သူငယ်ချင်း Facebook တွေ မှာ အဝတ်အစား ရောင်းတဲ့ ကြော်ငြာတွေ တန်းစီ တက်လာ ပါတော့တယ်။ သတင်းအချက်အလက်တွေ ကို အခြားနေရာမှာ အသုံးချမှုတွေ ရှိနိုင်ပါ တယ်။
လူမှုကှနျယကျ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ခတျေစားနတေဲ့ FACE APP…..သုံးလိုကျရငျ ကိုယျ့ဆီက ဘယျလို ဒတောတှေ ပါသှားနိုငျလဲ..?
လူတိုငျးရဲ့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့တိုငျးမှာ မွငျနရေတဲ့ FACE APPအကွောငျး သုံးစှဲသူ သူငယျခငျြးမြား အားလုံး သိရှိစခေငျြရုံ သကျ သကျပါ…။လူတိုငျးရဲ့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့တိုငျးမှာ မွငျနရေတဲ့ FACE APP သငျက app စသှငျး ထားထဲက ငါ့အခကျြအလကျတှေ ကို လိုသလို သုံးပါတော့လို့ ကတိပေးထားပွီးသား ဖွဈနေ ပါပွီ။
FaceApp တခုထဲ မဟုတျပါ အခွားသော အလကားရတဲ့ software တိုငျး ဒီလို လုပျတတျကွပါတယျ။ပထမဆုံး သူ က သငျ့ရဲ့ friend list ကိုယူ ပါတယျ။ ပွီးရငျ ဖုနျး နဲ့ ကှနျပြူတာ အမြိုးအ စား model IP address စတာတှအေပွငျ၊ ဘယျ website တှဝေငျကွညျ့ထားလဲ အှနျ လိုငျးမှာ ဘာတှေ လုပျနလေဲ ဆိုတဲ့ လူတိုငျးရဲ့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့တိုငျးမှာ မွငျနရေတဲ့ FACE APPဖွဈပါတယျ။
သူက သတငျးအခကျြအလကျတှကေို ယူသှား ပါမယျ။ ဖုနျးထဲ ကို App တခုသှငျးရငျ install လုပျတဲ့အခါ yes I agree ဆိုပွီး ဘာမှ မဖတျ ပဲ မသှငျးလိုကျပါနဲ့ ။ သူ့ စာခြုပျ (terms and condition အောကျကပုံမှာ)အတိအလငျး ရေးထား ပါတယျ။ yes I agree ဆိုရငျ သူ့ကို လို ခငျြတာ ယူပါလို့ ကတိပေး လိုကျရတာပါ။
သူက သငျ့ဆီက သတငျး အခကျြအလကျတှေ ကို အှနျလိုငျး စြေးရောငျးတဲ့ သူတှဆေီ ပွနျပေးပွီး ဝငျငှေ ရှာပါတယျ။ ဥပမာ သငျက “မင်ျဂ လာဆောငျ မှာ ဘာဝတျ ရမလဲ ၈၃၄ တို့” ဆိုပွီး စာတကွောငျးရေး လိုကျတာနဲ့ ၊သငျနဲ့ သငျ့သူငယျခငျြး Facebook တှေ မှာ အဝတျအစား ရောငျးတဲ့ ကွျောငွာတှေ တနျးစီ တကျလာ ပါတော့တယျ။ သတငျးအခကျြအလကျတှေ ကို အခွားနရောမှာ အသုံးခမြှုတှေ ရှိနိုငျပါ တယျ။
(၁၁) ရက် (၁၁) လ မှာ အပူအပင်သောကများ ကင်းဝေးစေရန် မဖြစ်မနေဒါလေး တော့လုပ်ပါ ထူးခြားပါလိမ့်မယ်